Brand အခွဲ တစ်ခုရဲ့ အနာဂါတ်လျှပ်စစ် Sedan ကားအဖြစ် ပုံဖော်လာနိုင်တဲ့ Hyundai Ioniq6! – MyMedia Myanmar
Brand အခွဲ တစ်ခုရဲ့ အနာဂါတ်လျှပ်စစ် Sedan ကားအဖြစ် ပုံဖော်လာနိုင်တဲ့ Hyundai Ioniq6!
မကြာခင်အသစ်ထွက်ရှိလာတော့မယ့် ကားအသစ် တစ်စီးကတော့ Hyundai Ioniq5ဖြစ်မှာ သေချာနေတာ ကြောင့် သူ့ရဲ့အနောက်မှာ ထွက်ရှိလာနိုင်တာ ကလည်း Brand အခွဲရဲ့ Ioniq6Sedan ကား ပဲ ဖြစ်လာ ဖို့ ရှိနေပါ တယ်။ Motor.es ကနေ ရရှိထားတဲ့ ခန့်မှန်း ဒီဇိုင်း ပုံရိပ် တွေ အရ ဆိုရင် အဆိုပါ တံခါးလေးပေါက်ပါ ကားရဲ့ပုံစံ တွေက ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာ ကိုမြင်ယောင် ကြည့်လို့ ရနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Ioniq5မှာ တုန်းက မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ လေးထောင့် ကျကျ ဒီဇိုင်းကနေ အခု Ioniq6ရဲ့ Renderings တွေမှာ တော့ ပိုပြီးပါးလွှာ သေးသွယ်တဲ့ အမြင်ကို ပြောင်းလဲ သွားတာ ကို တွေ့ရမှာပါ။ မြင်လိုက်တာနဲ့ ထူးထူးခြားခြား ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေမယ့် အရာကတော့ Trim အနည်းငယ် ဟာ Headlights ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းကနေ အနောက်ဘက် ကို တောက်လျှောက် ထွက်သွားတဲ့ ဒီဇိုင်း ဖြစ်နေ ပြီး Fenders တွေ ၊ တံခါးပေါက်တွေကို ဖြတ်ကာ နောက်ပိုင်းက D-Pillar နားမှာ အဆုံးသတ် ထားတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒါ့အပြင် အခုမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီဇိုင်းမှာတော့ Arched Hood ပုံစံတွေနဲ့ အောက်ဘက်နားက Fascia မှာအနည်းငယ်ဟ နေတဲ့ ဒီဇိုင်းတို့ကိုလည်း မြင်တွေ့ထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကားကတော့ လျှပ်စစ်ကားတစ်စီး ဖြစ်တာကြောင့်ပို ပြီး ကြီးမားကာ အေးမြမှုကို ပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်မယ့် Inlet ကြီးတွေကိုလည်း ယခင်တုန်းက Combustion Engine တွေမှာ သုံးခဲ့သလိုမျိုး မလိုအပ်တော့တာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဇိုင်းကို ခန့်မှန်းဖန်တီးသူကလည်း ယာဉ်ရဲ့အမြင်ပိုင်း ကို ထူးခြားဆန်းသစ် သွားအောင်လို့ နည်းလမ်း အသစ်တွေနဲ့ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ဖန်တီးသွားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Hyundai ဘက်ကနေ Ioniq ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားအခွဲကို ကြေညာခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ကုမ္ပဏီ ဘက်က အဆိုအရတော့ အခု6အမျိုးအစားဟာ Prophecy Concept ကနေ Inspire ယူထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခု Rendering ဟာ ယခင် ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းပုံရိပ် တစ်ချို့နဲ့ ဆင်တူမှုတွေ ရှိနေပေမယ့်လို့ Show ကားအနေနဲ့ က တော့ သိသိသာသာကို လှပနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကားမှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ Arched Shape ကြောင့် လည်း ပြတင်းပေါက်တွေ တစ်လျှောက်မှာ ကောင်းကောင်း ခွဲခြားဖန်တီး ပေးထား လိုက်နိုင်ပြန်တာပါ။ အဆိုပါ Ioniq5နဲ့6နှစ်မျိုး လုံးကတော့ Hyundai ရဲ့ Electric-Global Modular Platform ( E-GMP ) အပေါ်မှာ ပဲ အခြေခံပြီး တည်ဆောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။5အမျိုးအစားအတွက် ကတော့ Dual Motor Powertrain ကို အသုံးပြုလာနိုင်တာ ဖြစ်ပြီး 308 hp ( 230 kW ) စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ 58 kW ဘက်ထရီတို့ကို ထည့်သွင်းထား ပေး ကာ WLTP Range အရတော့ 280 မိုင် ( 450 km ) အထိရှိနိုင်တာ ဖြစ်ကာ အပိုဆောင်း ရွေးချယ်နိုင်ဦးမယ့် 73 kWh Battery Pack ကြောင့်လည်း 342 မိုင် ( 550 km ) အထိကို တိုးတက် လာနိုင်သေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို နှုန်းထား စွမ်းဆောင်ရည် အတူတူကိုပဲ Ioniq6မှာ အသုံး ပြုလာ ဖို့ မျှော်လင့် ခဲ့ရင်တောင်မှ6ရဲ့ ပါးလျတဲ့ ဒီဇိုင်းကြောင့်ပဲ တစ်ကြိမ် အားသွင်းရုံနဲ့တင် ပိုမိုသာလွန်တဲ့ ခရီးမိုင်တစ်လျှောက်ကို မောင်းနှင်နိုင်ဖို့လည်း မျှော်လင့် ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Ioniq6ကိုကတော့ အခု5ရောင်းချပြီးမယ့် တစ်နှစ်အကြာ လာမယ့် ၂၀၂၂ အတွင်းမှာတော့ မရောက်ရှိလာနိုင် သေးပါဘူး။ လာမယ့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်မှာ ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံး အမျိုးအစား အခွဲ အနေနဲ့ ပိုမိုတိုးတက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပြီး ပိုမိုကြီးမားတဲ့ Crossover တစ်စီးဖြစ်လာမယ့် Ioniq7ကိုပါ မျှော်လင့်လို့ ရလာနိုင်မယ့် အနေအထား အထိရောက်ရှိလာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Brand အခွဲ တစ်ခုရဲ့ အနာဂါတ်လျှပ်စစ် Sedan ကားအဖြစ် ပုံဖော်လာနိုင်တဲ့ Hyundai Ioniq6! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-07T16:00:20+06:30January 7th, 2021|MYCARS MYANMAR|